12x36 Podcast: AirPods, OLED iyo Betas | Wararka IPhone
12 × 36 Podcast: AirPods, OLED iyo Betas
Sugaya warka weyn ee bisha Sebtember, xagaaga wuxuu ku bilaabmaa guux fara badan oo ku saabsan alaabooyin cusub. AirPods, iPad oo leh shaashadda OLED, Aqoonsiga Taabashada ee shaashadda, iwm.
Marka lagu daro wararka iyo fikirka ku saabsan wararka usbuuca, waxaan sidoo kale ka jawaabi doonaa su'aalaha dhageystayaashayada. Waxaan ku yeelan doonnaa hashtag #podcastapple firfircoon usbuuca oo dhan barta Twitter-ka sidaa darteed waad na weydiin kartaa waxaad rabto, naga yeel talo soo jeedin ama wixii maskaxdaada ku soo dhaca. Shaki, casharro, ra'yi iyo dib u eegis ku saabsan codsiyada, wax waliba waxay leeyihiin boos ka mid ah qaybtan oo qabsan doonta qaybta ugu dambeysa ee fiidiyowgeena iyo inaan dooneyno inaad naga caawiso inaan sameyno toddobaad kasta.
Waxaan ku xusuusinaynaa haddii aad rabto inaad ka mid noqoto mid ka mid ah bulshooyinka ugu waaweyn ee Apple ee Isbaanishka ah, soo gal wadahadalkeena Telegram (isku xirka) halkaad fikirkaaga ka dhiiban karto, su'aalo ka weydiin karto, ka faaloon karto wararka IWM. Oo halkan lacag kama qaadanayno inaan soo galno, kulana macaamili doonno haddii aad lacag bixiso. Waxaan kugula talineynaa inaad adiga iska qor iTunes en iVoox ama Spotify si qaybaha si otomaatig ah loogu soo dejiyo isla marka la helo. Ma rabtaa inaad halkan ka maqasho? Hagaag wax yar oo ka hooseeya waxaad haysataa ciyaaryahanka aad sameyso.
podcast: Ciyaar daaqad cusub
Isku qor RSS
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 12 × 36 Podcast: AirPods, OLED iyo Betas
Habka keydinta batteriga ayaa ku imaan doona iPad-ka mahadnaqa iPadOS 15
Apple si ay ula qabsato 'City on Fire' kuwa ugu iibsiga badan Apple TV + abuuraha OC, iyo Gossip Girl